कलियुगका कुरा: October 2012
कस्तो हुनुपर्नेरहेछ सुनसान हुनलाई?
काठमाडौंमा यसपटक दशैंमा सुनसान भएन भनेर गाउँमै रेडियोमा समाचार सुनेको। तर अरु बेला घटीमा एक घन्टा लाग्ने अफिस आउन आज दशैं बिदा सकिएर पूर्णीमा परेवाको दिन जम्मा २५ मिनेटमै ल्याइपुर्याओ चक्रपथ घुम्ने बसले। यी रेडियोलाई कस्तो हुनुपर्ने रहेछ कुन्नि काठमाडौं सुनसान हुन?
ठोक्किन आम्छन् त गाडी नि, मान्छे नि
मोटर नगुड्ने ठाममा गोडा दशेक दिन बसेर आको त। यो काठमाडौं छातिमा आफूले हिड्नै नजानेर हो कि, ह्याँकालाई दशैंले नछोडेको हो, ठोक्किन आम्छन् त गाडी पनि, मान्छे पनि।
काठमाडौं फर्किदाँ धन्नै गाडीले थिचेन
काठमाडौं सँधै ठूला बसमा आउने जाने बानी परेको, सडकको खाल्डाखुल्डी खासै देखिन्थेन अलिअलि उफार्थ्यो मात्र। मौकाले/भाग्यले यसपटक सानो गाडीमा काठमाडौं फर्किन पाइयो। राम राम! खानीखोलाबाट नागढुंगासम्म आउँदा सानो गाडी त खाल्डोमा परेर माथिबाट अर्को गाडीले थिच्ला जस्तो पो हुनेरहेछ बेलाबेलामा। काठमाडौं गिटी बालुवा ल्याउने ट्रिपरले बाटो बिगारेर होला काठमाडौं भित्रिने तर्फको सडक लेन त अर्को भन्दा एक हात जति तल छ।
काठमाडौं फर्कँदा सकभर पाएसम्म ठूलै बस नभए टडकमै हिंड्न पर्ने हामीलाई नै रमाइलो रछ।
युरिया हालेको जमरा
गाउँको चौतारीमा भेला भएकाहरुको गफ 'यसपटकको दशैंमा जमरा राम्रोसँग सप्रिएन त्यसैले अलिकति युरिया हालें मैले त।'
दशैंमा सम्झने एक घटना
दशैं आएपिच्छे सम्झने एउटा घटना।
म नौ कक्षामा पढ्दै गर्दा दशैंमा एउटा कार्यक्रम राखेका थियौ गाउँमा। शहरतिरबाट दशैं मनाउन गएका गन्य-मान्य भन्नेहरुले गाउँ यस्तो भो/उस्तो भो, गाउँ बिग्रियो भन्दै गाउँलेका कुरा निकै काटे। त्यसपछि गाविसका अध्यक्षले भाषण गरे- 'वर्षमा पाँच दिन गाउँ आउँछन् दशैं मनाउन, अनि कार्यक्रम राखेर भाषण गर्दै गाउँ बिग्रियो, यसो गर उसो गर भन्छन्। गाउँलाई साँच्चै माया गर्ने हो भने गाउँ फर्किएर आओ। यही गाउँमा बसेर गाउँ बनाऔं। नभए दोष मात्र नदिओ।'
Note: दशैंमा गाउँ गएर भाषण गर्ने हो भने होस गरम् है।
यो दशैं परिवारका लागि
यसपालि दशैंमा न हाइकिङ, न ट्रेकिङ, न बाइकिङ, न कुनै घुमघाम, न कुनै ध्यान क्याम्प। बा- आमाको लागि हो एक साता।
यतिकुरा लेख्दै मन भरिएर आइसक्यो। जतिसक्दो छिटो गाउँ हिडिन्छ अब।